Tanàna mahafinaritra an'i Segovia: Avy any Pedraza ka hatrany Turégano | News Travel
Louis Martinez | 27/04/2022 09:00 | Tanànan'ny Espana, Fialan-tsasatra
Betsaka ny betsaka Tanàna mahafinaritra any Segovia, izany no mahatonga anay manoro hevitra mafy anao hanao fialan-tsasatra amin'ity faritany ity Castilla y León. Raha ny marina ny renivohitra mihitsy, raha ny tena izy, dia mendrika ny hitsidika anao hankafy ny lakan-dranony mijoalajoala sy ny Alcázar tsy latsa-danja amin'izany.
Saingy, ankoatra izany, ny faritany dia manolotra anao tanàna toy izany Sepulveda, voahodidin'ny tontolo mahavariana ao amin'ny valan-javaboary Hoces del Río Duratón, miaraka amin'ny hafa toy ny vato, izay nahavita nitazona ny maha-izy azy rehetra tamin'ny Moyen Âge. Hasehonay anao ireo sy ireo tanàna hafa mandrafitra ny fitsidihantsika ireo tanàna mahafinaritra ao Segovia.
1 Pedraza, tanàna tamin'ny Moyen Âge
2 Sepúlveda, iray amin'ireo tanàna mahafinaritra indrindra any Segovia
3 Ayllón, tontolo voajanahary manana tombontsoa hafa
4 Cuéllar, vatosoa iray hafa amin'ireo tanàna mahafatifaty ao Segovia
5 Ny toeram-pambolena San Ildefonso
6 Turégano, tanàna iray misy angano
Pedraza, tanàna tamin'ny Moyen Âge
Ny lapan'i Pedraza, iray amin'ireo tanàna mahafatifaty ao Segovia
Vao nanomboka ny dianay izahay namakivaky ity tanàna mimanda tsy manam-paharoa ity izay hitondra anao mivantana any amin'ny Moyen Âge. Eo amin'ny arabe tery be vato no ahitanao trano misy palitao eo amin'ny tavany sy fiangonana romanesque toy ny an'i San Juan.
Azonao atao ihany koa ny misotro kafe ao aminy Kianja lehibe tena Castilian ary mitety ny Vavahadin'ny Villa ho any amin'ny lapa pedraza, trano mimanda tamin’ny taonjato faha-XNUMX naverina tamin’ny laoniny tamin’ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Efa tao anatin'ny folo taona voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nahazo ny mpanao hosodoko Ignatius Zuloaga, izany no mahatonga azy io amin'izao fotoana izao ny tranombakoka natokana ho an'ny sariny.
Misy mihitsy aza izany angano amin'ny fomba Romeo sy Juliet izay tsy zakanay ny milaza aminao. Voalaza ao fa raiki-pitia tamin’ny tovolahy iray antsoina hoe Roberto i Elvira, vadin’ny kaontin’ny lapa. Rehefa fantatr’ilay aristocrat izany dia nasainy novonoina izy. Ary, noho ny fahafantarana izany, dia namono tena ilay vehivavy. Lazain'ny tantara fa nisy olona nahita azy ireo nandeha an-tanana ary nisy halo afo teo ambonin'ny lohany namakivaky ny lapa.
Ny vanim-potoana mitovy amin'ny trano mimanda dia an'ny taloha am-ponja, izay tao amin’ny tilikambo fiambenana iray, izay tsy nipetrahan’ny voafonja sy ny mpiandry tranomaizina. Saingy te hiresaka aminao momba ny fety iray tena mahaliana izay ankalazaina ao Pedraza. Momba ny Candle Night, izay mitranga amin'ny fiandohan'ny volana jolay ary mandritra izany dia tapaka ny jiro rehetra mba hialana amin'ny tanàna izay hazavain'izy ireo fotsiny.
Sepúlveda, iray amin'ireo tanàna mahafinaritra indrindra any Segovia
Ny fonja taloha Sepulveda
Tonga tao amin’ny tanànan’i Sepúlveda izahay izao, hoy ny fanambarana Toerana kanto manan-tantara ary tafiditra ao amin'ny fikambanana The Most Beautiful Towns in Espaina. Araka ny voalazanay taminao dia feno Hoces del Río Duratón Natural Park. Manankarena tokoa ny lovan'ity tanànan'i Segoviana ity ka manana faritra misy zavakanto lava-bato sy toerana arkeolojika roa an'ny vanim-potoana Visigoth.
Raha ny momba ny tsangambato sivily dia tsy maintsy mahita ny Fernan Gonzalez Castle, trano mimanda romanina fahiny naorin’io aristocrat io. Ny taloha koa am-ponja, izay misy ny biraon'ny fizahantany ankehitriny, sy ny maro tranobe aristokraty. Anisan'izany ny tranon'ny fianakaviana Proaño, miaraka amin'ny fasade Plateresque mahatalanjona, ary ny Count of Sepúlveda.
Raha ny momba ny maritrano ara-pivavahana dia manana endrika mahatalanjona ny tanàna Ensemble romanesque. Ny fiangonan'ny Virjin'ny Vatolampy, nanomboka tamin’ny taonjato faha-XNUMX, nanomboka tamin’ny San Salvador, izay tranainy indrindra amin'ny faritany manontolo (taonjato faha-XNUMX), ary Saint Just, foiben'ny Fueros Museum. Saingy manoro hevitra anao koa izahay mba hijery ny any San Pedro, San Bartolomé, Santiago ary Nuestra Señora de la Asunción.
Ayllón, tontolo voajanahary manana tombontsoa hafa
Lapan'ny tanàna Ayllon
Ity tanàna ity koa dia manana tontolo voajanahary miavaka, satria akaikin'ny Hoces del Río Duratón sy ny Tejera Negra Natural Park. Toy izany koa, dia eo amin'ny manodidina ny toerana arkeolojika ny Cave of Peña de Estebanvela, ny voalohany avy amin'ny Palaeolithic Ambony hita ao amin'ny faritanin'i Segovia ary misy koa ny necropolis Visigothic.
Ayllón manjaka avy any ambony ny Ny tilikambo fiambenana La Martina. Saingy afaka miditra ao an-tanàna ianao amin'ny alàlan'ny andohalambo medieval izay ho hitanao rehefa avy niampita ny tetezana romana izay miampita ny reniranon'i Aguisejo. Rehefa tafiditra ao an-tanàna ianao dia tsy maintsy mahita ny tsara tarehy Kianja lehibe arcaded izay ivon'ny fanorenana ny Town Hall, lapan’ny Marquises of Villena teo aloha. Ary, amin'ny lafiny iray, ny Fiangonana Romanesque San Miguel, ao anatiny dia hahita trano fiangonana gothic tsara tarehy natokana ho an'i Saint Sebastian ianao.
Na izany aza, ny fiangonana lehibe indrindra ao Ayllón dia ny Santa Maria la Mayor, zava-mahatalanjona baroque tamin'ny taonjato faha-XNUMX misy tilikambo lakolosy avo efapolo metatra vita tao anaty lakolosy. Amin'ny lafiny iray, rava ny fiangonan'i San Juan sy ny tranon'i San Francisco. Saingy mbola afaka mankasitraka ny hatsarany ianao. Afaka milaza aminao zavatra mitovy amin'izany izahay momba ny ermita de San Nicolás sy San Martín del Castillo.
Amin'ny lafiny iray, ny Convent of the Conceptionist Mothers dia romanesque sy ny Lapan'ny Eveka Vellosillo Renaissance. Ity farany dia manana ny Museum of Contemporary Art of Ayllón. Ary farany, manoro hevitra anao izahay hijery ny Casa Barracks, fonja tranainy izay heverina ho trano tranainy indrindra ao an-tanàna, ary ny tranon'ny voromahery, miaraka amin'ny ampingany manaitra.
Saingy, raha te hianatra bebe kokoa momba ny tantara manankarena ao Ayllón ianao, dia manoro hevitra anao izahay mba hanararaotra ny fitsidihana an-tsehatra izay nokarakaraina tao an-tanàna ary tanterahin'i Francisca, mpitsikilo tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Cuéllar, vatosoa iray hafa amin'ireo tanàna mahafatifaty ao Segovia
Cuéllar Castle, iray amin'ireo tanàna mahafinaritra indrindra any Segovia
Torak'izany ihany koa, toerana manan-tantara sy ara-javakanto ity mahagaga ity ary tsy mahagaga izany. mahafinaritra fotsiny lapan'ny ary ny azy fefy rindrina efa mendrika izany izy ireo. Ny voalohany, fantatra amin'ny anarana hoe Dukes of Alburquerque, dia natao ho fialofana ho an'ny mpanjakavavy Maria de Molina nandritra ny korontana nitranga taorian'ny nahafatesan'ny vadiny, Sancho IV.
Mitsangana avy amin'ny tendrony roa ny rindrin'ny Cuéllar tamin'ny Moyen Âge telo, izay voatahiry betsaka. Efa ao anatin'ny tanàna ianao dia hahita tsangambato maro be ka tsy azonay lazaina aminao ny momba azy rehetra. Saingy, noho ny maha-zava-dehibe azy, dia tsy maintsy mahita ny fananganana ny Town Hall, naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary nampifangaro ny Gothic amin'ny fomba Renaissance, ary koa ny Lapan'i Pedro I ilay lozabe na Tower House.
Mbola mahaliana kokoa aza ny fitambaran'ny Tsangambato Mudejar ny Cuellar. Anisan'ireo trano miavaka izay soso-kevitray ho hitanao ny ny fiangonana San Esteban, San Andrés ary San Martín. Saingy, amin'ny fitambarany, dia efa ho roapolo ny fanorenana an'ny vanim-potoana voalohany amin'ity fomba ity ary iray amin'ireo Mudejar miavaka indrindra amin'ny renirano Duero manontolo.
Saingy tsy mifarana eo ny zava-mahatalanjona ao Cuéllar. Izy io koa dia manolotra anao mahaliana fitambaran'ny monasitera. Anisan'ny manan-danja indrindra, Santa Clara, izay tranainy indrindra ihany koa, San Francisco, amin'ny fomba romanesque, San Basilio ary ny tranon'ny Purísima Concepción. Izany rehetra izany tsy manadino ny Sanctuary an'ny Vadin'i Henar, izay any ivelany ary misy sary sokitra romanesque an'ilay Virjiny mitovy anarana.
Na izany na tsy izany, azonao jerena ao Cuéllar ihany koa trano mihaja toy ny an'ny Duke, ny Rojas, ny Velázquez del Puerco na ny Daza, ary koa ny Lapan'i Santa Cruz, ary koa ny Mudejar.
Ny toeram-pambolena San Ildefonso
Royal Palace and Gardens of San Ildefonso
Tsy afaka nanadino ny fitsidihanay ireo tanàna mahafinaritra an'i Segovia izahay Toeram-panjakan'i San Ildefonso, antsoina hoe izany, satria trano fonenan’ny mpanjakan’i Espaina tamin’ny fahavaratra. Noho izany antony izany, manana ao amin'ny villa ny mahavariana ianao Royal Palace, izay nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taonjato faha-XNUMX, araka ny baikon’i Felipe V. Tamin'izany fotoana izany dia nanao antony, izay maka tahaka ny fomba frantsay mahazatra fantatry ny mpanjaka tamin'ny fahazazany.
Toy izany koa, miaraka amin'ny lapa dia naorina ny fiankinan-doha hafa toy ny Trano tranainy an'ny vehivavy, izay misy ankehitriny ny Tapestry Museum, ny Tranon'ny voninkazo sy ny varotra, ny Royal Stables, ny Royal Collegiate Church of the Holy Trinite ary ny Pantheon of San Ildefonso.
Mandritra izany fotoana izany dia an'ny Royal Crystal Factory of La Granja, izay misy ny tranombakoka fitaratra ankehitriny. Saingy, miaraka amin'ireo tsangambato mpanjaka, ny tanànan'i Segovian dia manolotra anao maro hafa. Ny zava-tsarobidy izany Neoclassical Church of Los Dolores na ny an'i San Juan sy Rosario. Fa koa amin'ny maha-zava-dehibe Tranon'ny Canons, ny Collegiate Church, ny Bauer House ary ny Corps Guards Barracks. Izany rehetra izany tsy manadino ny Tranon'ny Zazakely, an'ny lovan'ny mpanjaka sy trano fandraisam-bahiny nasionaly amin'izao fotoana izao.
Turégano, tanàna iray misy angano
Turégano, misy ny lapany ao ambadika
Hamarana ny dianay amin'ny alalan'ny tanàna mahafatifaty ao Segovia ao amin'ity tanàna tsara tarehy ity izay misy marika ny lapan'ny. Antonio Perez, ilay mpitan-tsoratr’i Filipo II nivadika.
Fa tokony hitsidika ao Turégano ihany koa ny tsara tarehy Fiangonana Santiago, fanorenana romanesque nahery vaika tamin’ny taonjato faha-XNUMX, na dia nohavaozina aza tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Aza adino ny alitara baroque afovoany na zavatra hafa manan-danja ara-javakanto izay avy amin'ny tempoly hafa ao amin'ny faritany. Farany, akaikin'ny tanàna no mahaliana Museum momba ny ala.
Torak'izany koa, manana toetra angano i Turégano. Momba ny antso mason'i Piron, jiolahy teraka tao amin’ny kaominina ary nanjaka tamin’ny lalana teny an-toerana. Araka ny angano dia iray amin’ireo fandrobana lehibe indrindra nataony tao amin’ny distrikan’i La Cuesta no nalainy ny vola rehetra nananany tamina mpiompy mpanankarena iray izay vao avy nivarotra ny ombiny rehetra teny amin’ny tsenan’i Turégano.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany amin'ireo Tanàna mahafinaritra any Segovia. Saingy misy maro hafa mendrika ny fitsidihanao ihany koa. Ohatra, Riaza, miaraka amin'ny Plaza Mayor tsara tarehy sy ny fiangonany Nuestra Señora del Manto, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na hazo kely, miaraka amin'ny rindrina sy vavahady tamin'ny Moyen Âge ary ny fiangonan'i Santa María. Tsy toy ny dia mahafinaritra ny mitsidika ireo tanàna ireo Castilla y León?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Tanàna mahafinaritra any Segovia